व्या.पारीसँग मिलेर देशमा लो,डसेडिङ गराउने मुकेश काफ्ले कां,ग्रेसद्वारा पु!रस्कृत
व्यापारीसँग मिलेर देशमा लो,डसेडिङ गराउने मुकेश काफ्ले कां,ग्रेसद्वारा पुर,स्कृत
काठमाडौं, १९ भदौ। देशका वि,वादा,स्पद व्यक्तिहरुलाई कां,ग्रेस स,भापति शेरबहादुर देउवाले पु,रस्कृत गरेका छन् । के,न्द्रीय सदस्य ए,नपी साउदको ने,तृत्वमा रहेको शु,भेच्छुक सं,स्था स,मन्वय वि,भागमा वि,वादास्पद व्यक्तिहरु राखिएका छन् ।
जसमा बि,द्युत् प्रा,धिकरणमा भ्र,ष्टाचारका आ,रोपी मु!केश का,फ्लेदेखि बैंकिङ क!सुर मु,द्दा झे,लिरहेका वि,ष्णु धि,तालसम्म छन् ।
नेपाल वि,द्युत प्रा,धिकरणको का,र्यकारी निर्देशकको रुपमा रहेर लो,ड सेडिङ बढाएको भन्दै उनको चौ!त!र्फी आ,लोचना हुँदै आएको छ। कां,ग्रेस स,मर्थित इ!न्जिनियरहरुको सं,स्थामा आ!वद्ध उनी गत नि!र्वाचनपछि भएको उक्त सं,स्थाको अधि,वेशनमा प,राजित भएका थिए। देउवा प,क्षीय प्या,नलबाट प्र!त्यासी बनेका उनलाई व,रिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सि,टौला पक्षले ह,राएको थियो। व्या,पारीहरुसँग मिलेर उनले जनतालाई लो,डसेडिङ गराएको आ,रोप समेत छ ।
त्यस्तै विष्णु धिताल ए,पेक्स बैंकको अ,नियमिततामा मु,छिएका व्यक्ति हुन् । जसलाई दुई वर्षअघि सि,आईबीले प,क्राउ गरी मु,द्दा दा,यर गरेको थियो । पा,टन अदा,लतमा उनको मु,द्दा वि,चाराधित छ ।
वि,भागमा बढीमा ५१ जना सदस्य बनाउन मिल्ने वि,धानको व्यवस्था छ। देउवाले बि,हीबार वि,स्तार गरेको शु,भेच्छुक संस्था सम,न्वय वि,भाग ४८ जना थपेका छन्। साउदलाई उक्त वि,,भागको प्र,मुखको जि,म्मेवारी गत फा,गुनमा दिएका थिए।
बिहीबार देउवाले वि,स्तार गरेका थप सदस्यः
२५. उ,द्धव दाहाल (काठमाडौं)
२९. का,शीकुमार जोशी (पर्वत)
४८. विष्णुमाया पौडेल (चितवन